ခရစ္စမတ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယောင်းမသိသေးတဲ့ အချက် (၁၀) ချက် -
ခရစ္စမတ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယောင်းမသိသေးတဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
Posted on December 25, 2018 Author Christina Rosy	Comment(0)
တချို့အချက်တွေဆို ပါးစပ်အဟောင်းသားပါ ဖြစ်သွားမယ်နော်…
အခုခေတ်မှာတော့ ခရစ္စမတ်စ်ဆိုတာက ဘာသာရေးပွဲတော်တစ်ခုဆိုတာထက် ပျော်ရွှင်စရာအားလပ်ရက်လေးတစ်ခုလို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလာကြပါပြီ။ ခရစ္စမတ်စ်ပဒေသာပင်၊ ခရစ္စမတ်စ်ဘိုးဘိုးရုပ်၊ ရောင်စုံမီးသီး စတဲ့ ခရစ္စမတ်စ်အငွေ့အသက်လေးတွေကို နေရာတိုင်းလိုလိုမှာလည်း တွေ့လာရပါတယ်။ လူတိုင်းသိထားတာက ခရစ္စမတ်စ်ဆိုတာ ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ အနေနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ ကျင်းပတယ်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ယောင်းတို့ အက်ဒမင်တို့မသိသေးတဲ့ ခရစ္စမတ်စ်ရဲ့ တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လေးတွေ ရှိနေသေးလို့ ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်နော်။
၁။ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ မွေးနေ့
ခရစ္စမတ်စ်ပွဲကို ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့နေ့အနေနဲ့ ကျင်းပကြပေမဲ့ မွေးနေ့က ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့မှာ ကျရောက်ပါတယ်လို့ ကျမ်းစာထဲမှာရော၊ တခြားသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေထဲမှာ မပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ ခရစ်တော်က နွေးဦးမှာ မွေးဖွားတယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ခရစ္စမတ်စ်ပွဲတော်ဟာ အေဒီ၃၀၀နှောင်းပိုင်းမှ တရားဝင်ပွဲတော်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။
ခရစ္စမတ်ဖိုးဖိုး Santa Claus ကတော့ စိန့်နီကိုလတ်ဖြစ်ကြောင်း အရင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီအရ ၄ရာစုတုန်းက ခရစ်ယာန်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတစ်ပါးက သူ့မှာရှိတဲ့ အမွေအနှစ်တွေကို ဆင်းရဲသားတွေကို ပေးဝေခဲ့တဲ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေကို ကျွန်ဘဝမှ ကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း သူ့အကြောင်းလူသိများလာပြီး ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေက Sinter Klas လို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ရင်းကနေ ယနေ့ခေတ်မှာ Santa Claus ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
၃။ ခြေအိတ်ချိတ်တဲ့ ဓလေ့
ခြေအိတ်လေးတွေချိတ်တဲ့ ဓလေ့ပေါ်လာတာကတော့ဒီလိုပါ။ ဆင်းရဲတဲ့အဘိုးအိုတစ်ဦးက သူ့သမီး၃ယောက်ကို လက်ထပ်ပေးဖို့ ငွေကြေးမရှိပါဘူး။ တစ်ညမှာ စိန့်နီကိုလတ်က အဘိုးအိုအတွက် ရွှေအိတ်တစ်အိတ်ကို မီးခိုးခေါင်းတိုင်ပေါ်က ထည့်ပေးလိုက်တာ မီးဖိုနားမှာအခြောက်ခံထားတဲ့ခြေအိတ်ထဲကို ကျသွားရာကနေ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။
၄။ စန်တာရဲ့ ဝတ်စုံအနီကြီး
၁၉၃၁မှာ ကိုကာကိုလာ ကုမ္ပဏီက မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာအတွက် ငှားခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာHaddon Sundblom က တစ်ဆင့် ယောင်းတို့အက်ဒမင်တို့သိတဲ့ အနီရောင်ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ဖော်ရွေတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ ဝဝဖိုင့်ဖိုင့်မုတ်ဆိတ်ဖြူ ခရစ္စမတ်စ်ဘိုးဘိုးကြီးဖြစ်လာရတာပါ။
Related Article >>> သင်မသိသေးတဲ့ ခရစ္စမတ်အကြောင်း
၅။ ခရစ္စမတ်စ် အလှဆင်တုတ်ကောက်လေးတွေရဲ့ အစ
၁၈၄၇မှာ ဂျာမန်-ဆွီဒင်စပ်လူတစ်ယောက်က သူ့သစ်ပင်တွေကို တုတ်ကောက်သကြားလုံးလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ရင်းကနေ ခရစ္စမတ်စ်အလှဆင်တုတ်ကောက်အနေနဲ့ အသုံးပြုလာကြတာပါ။
၆။ X’mas လို့ ရေးတာ နိမိတ်မကောင်းဘူးဆို?
ခရစ္စမတ်စ်ကို X’mas လို့ပြောတဲ့အခါ တချို့တွေက စာလုံးပေါင်းအမှားဘာညာသာရကာနဲ့ ငြင်းခုန်တာတွေရှိပါတယ်။ ရှေ့စာလုံး Christ ကိုဖျောက်လိုက်တဲ့အတွက် နိမိတ်မရှိဘူး ဘာညာလို့လည်းပြောကြပါသေးတယ်။ တစ်ကယ်တော့ Xဆိုတာ ဂရိအက္ခရာ “chi” ဖြစ်ပြီး Χριστός (Christ) ရဲ့အစလည်းဖြစ်တာကြောင့် X’mas လို့ခေါ်ဝေါ်တာလည်းမမှားပါဘူး။
၇။ Jingle Bell သီချင်း
Jingle Bell သီချင်းက Thanksgiving ပွဲအတွက်ဖြစ်ပြီး ခရစ္စမတ်စ်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ မထင်ထားဘူးမလား 😛
၈။ ပင့်ကူ နဲ့ ပင့်ကူမျှင်
ဂျာမနီ၊ ပိုလန်နဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေမှ ခရစ္စမတ်ပဒေသာပင်ပေါ် ပင့်ကူ(သို့) ပင့်ကူအိမ်၊ ပင့်ကူမျှင်တွေ့ခြင်းက ကံကောင်းခြင်းရဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
Related Article >>> ခရစ္စမတ်မှာ သယ်ရင်းတွေနဲ့မဝုန်းရသော်
ခရစ္စမတ်စ်မှာ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အလေ့အထကတော့ သူငယ်တော် ယေရှုအတွက် မင်းသုံးပါး လက်ဆောင်ပဏ္ဏာဆက်သခြင်းကနေ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။
အစောပိုင်း ကာလတွေက ခရစ္စမတ်စ်သစ်ပင်တွေကို ပန်းသီးတွေနဲ့ အလှဆင်ခဲ့ကြတာပါ။
ကဲ..ခရစ္စမတ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်တွေလည်း သိပြီးပြီဆိုတော့ ခရစ်ယာန်သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ မုန့်စားဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို မန်းရှင်းခေါ် အသိပေးကြရအောင်နော်။
တခြို့အခကျြတှဆေို ပါးစပျအဟောငျးသားပါ ဖွဈသှားမယျနျော…
အခုခတျေမှာတော့ ခရစ်စမတျဈဆိုတာက ဘာသာရေးပှဲတျောတဈခုဆိုတာထကျ ပြျောရှငျစရာအားလပျရကျလေးတဈခုလို စညျကားသိုကျမွိုကျစှာ ကငျြးပလာကွပါပွီ။ ခရစ်စမတျဈပဒသောပငျ၊ ခရစ်စမတျဈဘိုးဘိုးရုပျ၊ ရောငျစုံမီးသီး စတဲ့ ခရစ်စမတျဈအငှအေ့သကျလေးတှကေို နရောတိုငျးလိုလိုမှာလညျး တှလေ့ာရပါတယျ။ လူတိုငျးသိထားတာက ခရစ်စမတျဈဆိုတာ ယရှေုခရဈတျောမှေးဖှားတဲ့နေ့ အနနေဲ့ ခရဈယာနျဘာသာဝငျတှေ ကငျြးပတယျလို့ပါ။ ဒါပမေဲ့ ယောငျးတို့ အကျဒမငျတို့မသိသေးတဲ့ ခရစ်စမတျဈရဲ့ တခွားစိတျဝငျစားစရာအခကျြလေးတှေ ရှိနသေေးလို့ ဒီဆောငျးပါးလေးနဲ့ ဖောကျသညျခလြိုကျပါတယျနျော။
၁။ ယရှေုခရဈတျောရဲ့ မှေးနေ့
ခရစ်စမတျဈပှဲကို ယရှေုခရဈတျောမှေးဖှားတဲ့နအေ့နနေဲ့ ကငျြးပကွပမေဲ့ မှေးနကေ့ ဒီဇငျဘာ ၂၅ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျပါတယျလို့ ကမျြးစာထဲမှာရော၊ တခွားသမိုငျးမှတျတမျးတှထေဲမှာ မပါပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သမိုငျးပညာရှငျတှကေတော့ ခရဈတျောက နှေးဦးမှာ မှေးဖှားတယျလို့ ခနျ့မှနျးခဲ့ကွပါတယျ။ ခရစ်စမတျဈပှဲတျောဟာ အဒေီ၃၀၀နှောငျးပိုငျးမှ တရားဝငျပှဲတျောရကျအဖွဈ သတျမှတျခဲ့ကွတာပါ။
ခရစ်စမတျဖိုးဖိုး Santa Claus ကတော့ စိနျ့နီကိုလတျဖွဈကွောငျး အရငျဆောငျးပါးတဈပုဒျမှာရေးခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒဏ်ဍာရီအရ ၄ရာစုတုနျးက ခရဈယာနျပုပျရဟနျးမငျးကွီးတဈပါးက သူ့မှာရှိတဲ့ အမှအေနှဈတှကေို ဆငျးရဲသားတှကေို ပေးဝခေဲ့တဲ့အပွငျ အမြိုးသမီးတှကေို ကြှနျဘဝမှ ကယျတငျခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျပိုငျး သူ့အကွောငျးလူသိမြားလာပွီး ဒတျချြလူမြိုးတှကေ Sinter Klas လို့ချေါဝျေါခဲ့ရငျးကနေ ယနခေ့တျေမှာ Santa Claus ဖွဈသှားပါတော့တယျ။
၃။ ခွအေိတျခြိတျတဲ့ ဓလေ့
ခွအေိတျလေးတှခြေိတျတဲ့ ဓလပေ့ျေါလာတာကတော့ဒီလိုပါ။ ဆငျးရဲတဲ့အဘိုးအိုတဈဦးက သူ့သမီး၃ယောကျကို လကျထပျပေးဖို့ ငှကွေေးမရှိပါဘူး။ တဈညမှာ စိနျ့နီကိုလတျက အဘိုးအိုအတှကျ ရှအေိတျတဈအိတျကို မီးခိုးခေါငျးတိုငျပျေါက ထညျ့ပေးလိုကျတာ မီးဖိုနားမှာအခွောကျခံထားတဲ့ခွအေိတျထဲကို ကသြှားရာကနေ ပျေါပေါကျလာတာပါ။
၄။ စနျတာရဲ့ ဝတျစုံအနီကွီး
၁၉၃၁မှာ ကိုကာကိုလာ ကုမ်ပဏီက မဂ်ဂဇငျးကွျောငွာအတှကျ ငှားခဲ့တဲ့ ပနျးခြီဆရာHaddon Sundblom က တဈဆငျ့ ယောငျးတို့အကျဒမငျတို့သိတဲ့ အနီရောငျဝတျစုံဝတျပွီး ဖျောရှတေဲ့အပွုံးလေးနဲ့ ဝဝဖိုငျ့ဖိုငျ့မုတျဆိတျဖွူ ခရစ်စမတျဈဘိုးဘိုးကွီးဖွဈလာရတာပါ။
Related Article >>> သငျမသိသေးတဲ့ ခရစ်စမတျအကွောငျး
၅။ ခရစ်စမတျဈ အလှဆငျတုတျကောကျလေးတှရေဲ့ အစ
၁၈၄၇မှာ ဂြာမနျ-ဆှီဒငျစပျလူတဈယောကျက သူ့သဈပငျတှကေို တုတျကောကျသကွားလုံးလေးတှနေဲ့ အလှဆငျရငျးကနေ ခရစ်စမတျဈအလှဆငျတုတျကောကျအနနေဲ့ အသုံးပွုလာကွတာပါ။
၆။ X’mas လို့ ရေးတာ နိမိတျမကောငျးဘူးဆို?
ခရစ်စမတျဈကို X’mas လို့ပွောတဲ့အခါ တခြို့တှကေ စာလုံးပေါငျးအမှားဘာညာသာရကာနဲ့ ငွငျးခုနျတာတှရှေိပါတယျ။ ရှစေ့ာလုံး Christ ကိုဖြောကျလိုကျတဲ့အတှကျ နိမိတျမရှိဘူး ဘာညာလို့လညျးပွောကွပါသေးတယျ။ တဈကယျတော့ Xဆိုတာ ဂရိအက်ခရာ “chi” ဖွဈပွီး Χριστός (Christ) ရဲ့အစလညျးဖွဈတာကွောငျ့ X’mas လို့ချေါဝျေါတာလညျးမမှားပါဘူး။
၇။ Jingle Bell သီခငျြး
Jingle Bell သီခငျြးက Thanksgiving ပှဲအတှကျဖွဈပွီး ခရစ်စမတျဈအတှကျ မဟုတျပါဘူး။ မထငျထားဘူးမလား 😛
၈။ ပငျ့ကူ နဲ့ ပငျ့ကူမြှငျ
ဂြာမနီ၊ ပိုလနျနဲ့ ယူကရိနျးနိုငျငံတှမှေ ခရစ်စမတျပဒသောပငျပျေါ ပငျ့ကူ(သို့) ပငျ့ကူအိမျ၊ ပငျ့ကူမြှငျတှခွေ့ငျးက ကံကောငျးခွငျးရဲ့ နိမိတျလက်ခဏာဖွဈတယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။
Related Article >>> ခရစ်စမတျမှာ သယျရငျးတှနေဲ့မဝုနျးရသျော
ခရစ်စမတျဈမှာ လကျဆောငျပေးတဲ့ အလအေ့ထကတော့ သူငယျတျော ယရှေုအတှကျ မငျးသုံးပါး လကျဆောငျပဏ်ဏာဆကျသခွငျးကနေ ပျေါပေါကျလာတာပါ။
အစောပိုငျး ကာလတှကေ ခရစ်စမတျဈသဈပငျတှကေို ပနျးသီးတှနေဲ့ အလှဆငျခဲ့ကွတာပါ။
ကဲ..ခရစ်စမတျဈနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အခကျြတှလေညျး သိပွီးပွီဆိုတော့ ခရဈယာနျသူငယျခငျြးတှဆေီကနေ မုနျ့စားဖို့ပဲ ကနျြတော့တယျ။ မသိခငျြယောငျဆောငျနတေဲ့သူငယျခငျြးတှကေို မနျးရှငျးချေါ အသိပေးကွရအောငျနျော။
Tagged christmas, facts, Fun, Knowledge, things you didn't know, X'mas
ဒီအိမ်မှာကလေးထိန်းလုပ်မယ်ဆို လစာ ဒေါ်လာ ၆သောင်း ၃ထောင်ကျော်ရပါမယ်။
Posted on June 23, 2017 June 23, 2017 Author
စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုတော့ နောက်ကွယ်မှာ ရှိတယ်။
အလှဘုရင်မ ကလီယိုပတ်ထရာက ဘယ်လိုအမျိုးသမီးလဲ
Posted on November 29, 2017 December 1, 2017 Author Bori
ကလီယိုပတ်ထရာရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ လူတွေရဲ့အမြင်မှာမတူညီတာတွေရှိပါတယ်။ တစ်ချို့က အလှနတ်သမီး၊ တစ်ချို့က famme fatal ၊ တစ်ချို့က ရက်စက်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်းနေတဲ့ လူသတ်သမား၊ တစ်ချို့က အချစ်ကြီးသူ စသဖြင့်အမျိုးမျိုး ပုံဖော်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့..
Posted on June 4, 2018 July 25, 2018 Author Miyuki
ခဏအကြာတွင် ကျယ်လောင်သော မာန်ဖီသံတစ်ချက်ထွက်လာပြီးနောက် ရုတ်တရက် မှိန်ကျသွားသော ခရမ်းရောင်အလင်းအောက်တွင် သွေးများဖြာကျလာသည်
ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြတဲ့ Books That Can Change Your Life Event